Cashar laga soo qaatay dharka lagu dhaqdo, Kaniisadda Swiiserland ee adduunka oo dhan (WKG)
Dhar dhaqista waa mid ka mid ah waxyaabaha aad ogtahay inaad u baahan tahay inaad sameyso haddii aadan u helin qof kale oo adiga kuu sameeyo! Dharka waa in loo kala saaraa - midabyo mugdi ah oo laga soocay kuwa cad iyo kuwa fudud. Waxyaalaha dharka ah qaarkood waa in lagu maydhaa barnaamij jilicsan iyo saabuun khaas ah. Waa suurtogal in tan loo barto sida ugu adag sida aan ku soo qaatay kulliyad. Waxaan gashaday dharkeyga isboortiga cas ee cusub anigoo wata shaatiga cad ee mashiinka dharka lagu dhaqo wax walbana waxay u soo baxeen casaan. Intaa ka dib qof kastaa wuu ogyahay waxa dhaca haddii aad illowdo tan oo aad ku dhejiso shey jilicsan qalajiyaha!
Waxaan si gaar ah u ilaalinaa dharkeena. Laakiin mar marka qaarkood waxaan iska ilownaa in dadku ay isku tixgeliyaan si isku mid ah. Ma lihin dhibaatooyin badan oo cad oo muuqda, sida cudurro, naafo ama duruufo adag. Laakiin ma eegi karno dadka kale ee aadanaha ah waxaanan qiyaasi karnaa waxa iyo sida ay u fikiraan. Tani waxay u horseedi kartaa dhibaato.
Way fududahay in qof la eego oo go'aanno la gaadho. Qisadii Samuu'eel, oo loo maleeyay inuu boqor uga dhigo wiilasha Yesse intiisa badan, waa mid caadi ah. Kumaa u maleyn lahaa inuu Ilaah maskaxda ugu hayo David inuu yahay boqor cusub? Xitaa Samuu'eel wuxuu lahaa inuu barto casharkan: Laakiin Rabbigu wuxuu Samuu'eel ku yidhi, Ha u yaabin inuu isagu dherer leeyahay oo quruxsan yahay; Isagu ma aha kii la doortay. Waxaan u xukumaa si ka duwan dadka. Qofku wuxuu arkaa waxa indhaha ku dhaca; laakiin qalbigayga waxaan ku fiiriyaa ”(1 Sam 16,7 GNB).
Waa inaan ka taxadarnaa inaanan go'aan ka gaarin dadka aan la kulanay hadda. Xitaa kuwa aan yaqaannay muddo dheer. Ma qiyaasi karno waxa ay dadkani la kulmayaan iyo sida ay waaya-aragnimadooda u saameeyeen una qaabeeyeen.
Kolosay 3,12: 14-XNUMX (NGC) waxaa nalagu xasuusinayaa sida aan midkeenba midka kale ula dhaqmayo: “Walaalayaalow, Ilaah baa idin doortay, waxaad ka tirsan tihiin dadkiisa quduuska ah, oo Ilaah baa idin jeclaaday. Taasi waa sababta aad ugu labisatay naxariis badan, saaxiibtinimo, qumman, tixgelin iyo dulqaad. Midba midka kale ha u dulqaado oo ha cafiyo haddii mid uun haysto mid kan kale eedayn lahaa. Sidii Rabbigu idiin cafiyey, midkiinba midka kale ha cafiyo. Laakiin wax walba oo ka sii badan, naftaada u jeclaada jacayl; waa isku xidhku wuxuu kugu mideeyaa midnimo buuxda ”.
Efesos 4,31: 32-XNUMX (NGÜ) waxaan ka aqrinaa: "Qulqulka, xanaaqa, xanaaqa, xanaaqa xanaaqa iyo hadalka cayda ah waxba idiinma tarin, sida nooc kale oo xaasidnimo ah. Midkiinba midka kale ha u dhaqmo oo ha u qalbi jilicsanaado, oo ha is cafiyo sidii Ilaah ugu cafiyey Masiixa.
Sida aan ula dhaqanno dadka kale waa muhiim sababo badan awgood. Anagoo ah rumaystayaasha waxaan nahay qayb ka mid ah jidhka Masiixa. Qofna ma nebcaan jidhkooda, laakiin wuu daneeyaa (Efesos 5,29:XNUMX). Waxaa nalagu abuuray muuqaalka Ilaah. Markaan si xun ula dhaqanno ama u ceebeyno dadka kale, sharafdarro ayaan ku ixtiraamnaa Ilaah. Xeerka dahabiga ahi ma aha mid loo yaqaan 'cliché'. Waa inaan ula dhaqano dadka kale sida aan rabno in loola dhaqmo. Waxaan xasuusanahay inaan dhammaanteen la dagaallano dagaalladeenna shaqsiyadeed. Qaarkood way u cadahay deriskeena, qaar kalena si hoose ayaay ku dhex qarsoon yihiin. Iyaga keliya ayaa naloo yaqaan iyo annagaba.
Marka xigta ee aad kala soocdo dharka dharka, waxoogaa waqti ah uga fakar dadka ku nool noloshaada iyo tixgelinta gaarka ah ee qof walbaa u baahan yahay. Ilaah had iyo goor sidan buu noogu sameeyey oo uu ula dhaqmaa sidii shaqsiyaad u baahan daryeel gaar ah.